Fakafaka : Ny asa sy ny ezaka ihany ! | NewsMada
Kamo be tenda… Fanoharana tsy dia mahafinaritra loatra, kanefa dia hita sy hiain’ny maro tokoa izany. Tiantsika ny manonofy ary tsy misy maharatsy izany. Tiantsika ny mitaraina amin’ny olana maro. Tiantsika ny manondro ny hafa ho tompon’antoka amin’izay mitranga. Eny, tiantsika ny manantena, miandrandra ary mivavaka. Dia miandry eo… Miandry fahagagana, miandry mana hilatsaka, miandry valim-bavaka. Mora amintsika ny miteny ny tsy mety fa sarotra kosa raha hitsangana handray andraikitra!
Toa lasa kolontsaina raiki-tampisaka ilay te hahazo mora foana sy ny eo no ho eo. Asa, notaizana tamin’izany tokoa ve? Ny faniriana zato, ny fanatontosana tsy misy. Ny filàna arivo, ny finiavana aotra. Dia teraka eo ny fitsiriritana ny hafa. Fitsiriritana mivadika ho hevi-dratsy sy fialonana. Raha tsy izany indray, dia mihevi-tena ho totoim-bintana. Niangaran’Andriamanitra e, ratsy tononon’andro e, tsy nambinin’ny razana e sy ny sisa…
Eny, mety misy fanambinana avy amin’Andriamanitra sy ny razana sy izay rehetra mety hinoan’ny tsirairay ny an’ireny olona lazaina fa tafita ireny. Ireny olona lazaina fa nahomby teo amin’ny fiainany, na teo amin’ny fianarany na teo amin’ny asany ireny. Saingy, tsy fanambinana ihany. Nisy asa tao… Indrindra, nisy ezaka tao.
Nataony ambony ny nofy ary napetrany ny tanjona. Nilofo amin’izany izy ireo hanatratra izany. Niasa andro, niasa alina. Niezaka tsy nitarain-tana-nihepaka. Ka raha tonga amin’ny tanjony izy, rariny raha higoka ny fahasambarana, izay novolavolainy ihany. Eny, volavolaina ny hasambarana fa tsy misy manatitra fotsiny eo an-tokonana.
Raha toa mbola tsy nanomboka, mbola tsy tara. Tsy misy taonany ny fahatogavan-tsaina ary tsy misy taonany ny fanombohana asa sy ezaka. Aleo ny “soa ihany” no maro no ho ny “tahak’izay”!